कसले गर्लान् यू २३ टोलीको कप्तानी ? | Hamro Khelkud
कसले गर्लान् यू २३ टोलीको कप्तानी ?
काठमाडौँ (हाम्रो खेलकुद) – एएफसी यू २३ च्याम्पियनसिपका लागि नेपाली टोली कस्तो बन्ला भन्ने कौतुहलतासँगै त्यसको कप्तानी कसले गर्ला भन्ने चासो पनि त्यतिकै रहेको छ । यसै महिनाको अन्तिममा हुने यू २३ को छनोट चरण यात्राका लागि यूएइ निस्कने युवा टोली पछिल्लो सातादेखि ललितपुर सातदोबाटोस्थित एन्फा कम्प्लेक्समा प्रशिक्षणमा जुटेको छ ।
अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)को चाहना अनुसार यू २३ को तयारी हुन सकेको छैन । एक त एन्फाले पहिलो प्रस्ताव गरेको मेघराज केसीले प्रशिक्षणका लागि अस्वीकार गरे भने अर्को तीर प्रशिक्षणका लागि बोलाइएका ४० खेलाडी सबै उपस्थित भएनन् । यद्दपी, अनुभवी प्रशिक्षक राजुकाजी शाक्यको नेतृत्वमा युवा टोलीको प्रशिक्षण चलिरहेको छ ।
एन्फाले प्रारम्भिक छनोटका लागि ४० खेलाडीलाई बोलाएपनि प्रशिक्षणमा हाल २८ खेलाडी मात्र सम्मिलित छन्। प्रशिक्षक शाक्य पनि खेलाडीहरुको कमि भएकाले टोली छनोटमा केहि समस्या आउने स्वीकार्छन्। अन्तिम छनोटमा २३ खेलाडी युएईमा हुने प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउन टोलीमा सामेल हुनेछन्।
टोलीको अन्तिम छनोट गर्न जत्ति कठिन मानिएको छ कप्तानी पनि त्यत्ति नै कठिन हुने अनुमान गरिएको छ । दुई बर्षअघि नेपालले १२ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) मा स्वर्ण पदक जित्दा टोलीको कप्तानी विराज महर्जनले गरेका थिए । तर सागमा जस्तो यू २३ च्याम्पियनसिपमा २३ वर्ष माथिका खेलाडी खेलाउन नपाउने प्रावधान रहेकाले कप्तान छनोटमा केही कठिनाई आउने अनुमान गरिएको हो ।
पछिल्लो पटक जगजित श्रेष्ठले नेपाल यू २३ टोलीको कप्तानी गरेका थिए । जगजित लगायत समकालिन धेरै खेलाडीले उमेर हदबन्दी पार गरिसकेकोले टोलीले नयाँ कप्तान पाउनेछ । उमेर समूह कप्तानी गरिसकेका अनुभवी खेलाडीमध्येबाट कप्तान छनोट हुने सम्भावना छ । ती मध्ये केही नाम तल उल्लेख छ ।
१.विमल घर्ती मगर (फरवार्ड)– विमल युवा टोलीका सबैभन्दा अनुभवी खेलाडी हुन् । तीन बर्षअघि नेपालले उनकै कप्तानीमा घरेलु मैदानमा साफ यू १९ च्याम्पियनसिपको उपाधि जितेको थियो । यू १६ हुँदै १९ को कप्तानी गरिसकेका विमलले फेरी एकपटक युवा टोलीको कप्तानी पाउने सम्भावना छ । विमल राष्ट्रिय टोलीका पनि नियमित सदस्य हुन् ।
२.हेमन गुरुङ (मिडफिल्डर)– राष्ट्रिय टोलीका अर्का नियमित सदस्य हेमनसँग पनि युवा टोलीको कप्तानी गरिसकेको अनुभव छ । उनी यसअघि यू १६ ब्याचका कप्तान रहिसकेका छन् । हेमन विमलभन्दा एक ब्याच सिनियर खेलाडी हन् । सिनियर खेलाडीलाई कप्तानी दिने एन्फाको परम्परा रहेकोले उनले कप्तानी पाउने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।
३.अनन्त तामाङ (डिफेन्डर) – विमल जस्तै अनन्त पनि युवा टोलीका अनुभवी खेलाडी हुन् । राष्ट्रिय टोलीका समेत नियमित सदस्य रहेका अनन्त ले यू १९ टोलीले साफको उपाधि जित्दा अन्तिम समयमा कप्तानी रहेका थिए । उमेर समूहका टोलीमा उनले पटक पटक उपकप्तानको जिम्मेवारी निर्वाह गरिसकेका छन् । यसपटक कप्तानीको जिम्मेवारी पाउनेमध्ये उनी पनि एक हुन् ।